हामी कसरी (बनाम तपाइँ) सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दैछौं? | Martech Zone
हामी कसरी (बनाम तपाइँ) सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दैछौं?
शुक्रबार, डिसेम्बर 6, 2013 Douglas Karr
मलाई कहिले पक्का छैन गर्मी यो इनफोग्राफिक डिजाइन गरिएको छ, तर यो यति राम्रो छ कि मैले यसलाई साझा गर्नुपर्‍यो। यो राम्रो हुनुको कारण यो छ कि यो एक ईमान्दार दृश्य र तुलना हो कसरी मार्केटिंग पेशेवरहरु सामाजिक मिडिया को उपयोग औसत बनाम, गैर विपणन व्यक्ति। मलाई विश्वास छैन कि यस उद्योगमा पर्याप्त नेताहरूले सामाजिक मिडिया उपयोगको एक इमानदार तस्वीर रंग्दछन्। ती मध्ये धेरैले मलाई चाँडो रिक रिक्स प्राप्त गर्नुहोस् त्यहाँ बाहिर।
हामीले लगभग प्रत्येक ग्राहकको साथ अपेक्षाहरू रिसेट गर्नुपर्नेछ उनीहरूको प्रयोग र निम्न सामाजिक मिडियामा कस्तो देखिन्छ भनेरमा। जबसम्म उनीहरूसँग रक स्टार टीम छैन जुन हरेक घटनामा छ र गैर-स्टप बहुमूल्य सामग्री प्रकाशित गर्दछ, तिनीहरू केवल हामी जस्तो कोहीले जस्तो परिणाम लिने छैन जो जीवितको लागि यो गर्छन्। सायद यही कारण हो कि सामग्री मार्केटिंग कम्पनी र व्यक्तिको मार्केटिंग गतिविधिहरूमा ताज लिन फिर्ता आएको छ - सामाजिक मिडियाको साथ ठूलो पदोन्नति प्रदान गर्दै।
टैग: फेसबुकGoogle +गर्मीतातो एजेन्सीइन्स्टाग्रामLinkedInसामान्य बनाम विपणनPinterestसामाजिक मीडिया उपयोगSpotifytumblrtwitterसामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दैविरुद्ध
भविष्यवाणी गरिए अनुसार २०१ 2013 हलिडे बिक्री मोबाइल गयो
सुपर उत्सव फेसबुक छुट्टी प्रतियोगिता विचारहरू